ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတ၏ ဗွီတိုကို ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ရီပတ်ဘလစ်ကင်တို့ကြီးစိုးရာ အထက်လွှတ်တော်က ပယ်ဖျက်၊ ထောက်ခံမဲ ၃-ပုံ ၂-ပုံကျော်ဖြင့် ပြန်လည် အတည်ပြု။ – H2Oupdatenews
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတ၏ ဗွီတိုကို ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ရီပတ်ဘလစ်ကင်တို့ကြီးစိုးရာ အထက်လွှတ်တော်က ပယ်ဖျက်၊ ထောက်ခံမဲ ၃-ပုံ ၂-ပုံကျော်ဖြင့် ပြန်လည် အတည်ပြု။
=သောကြာနေ့တွင် ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ရီပတ်ဘလစ်ကင်ပါတီဝင်တို့ ကြီးစိုးရာ အထက်လွှတ်တော်က သမ္မတ၏ ဗီတိုကို ပယ်ဖျက်၍ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုလိုက်သည်။ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ အိမ်ဖြူတော်သက်တမ်း ၄-နှစ်အတွင်း ရာထူးမှ မထွက်ခွာမီ ရက်-၂၀ အလိုတွင် #သမ္မတ၏ဗီတို ကို ပထမ ဆုံးအကြိမ်ပယ်ချခြင်းဖြစ်သည်ဟု Reuters က ယနေ့ ရေးသားသည်။..
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်သစ်များ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခြင်းမတိုင်မီ ၂-ရက်အ လို၌ နှစ်သစ်ကူးကာလ ရှားပါးစွာတိုက်ဆိုင်လျှက်ရှိသည့် အထက်လွှတ်တော်က ယခုကဲ့သို့ ပယ်ချခြင်း ဖြစ် သည်။ သမ္မတ၏ ဗီတိုကိုပယ်ဖျက်ရန် အမတ်အားလုံး၏ ထောက်ခံမဲ ၃-ပုံ ၂-ပုံရရှိရန် လိုအပ်သည့်အနက် ၈၁ မဲ- ၁၃ မဲဖြင့် အသာစီးရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏။..
ရီပတ်ဘလီကန်အမတ်များသည် အိမ်ဖြူတော်၏ ကသောင်းကနင်းကာလအတွင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဖက်မှ အကြီးအကျယ် ရပ်တည်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရခြင်းမရှိသည့်နောက်ပိုင်း မဲမသမာမှုများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပရန် အဆိုကို အပြည့်အ၀ မထောက်ခံခြင်း၊ COVID-19 အကူအညီရေး စစ်ဆေးမှုများအတွက် တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့် သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာကို ပယ်ဖျက်ရေးသို့ ဦးတည်လာခြင်းများအတွက် ရီပတ်ဘလစ်ကင်အမတ်များအပေါ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဒေါသတကြီး ပြစ်တင်ခဲ့သည်။..
ရီပတ်ဘလီကန်တို့ ဦးဆောင်သော အထက်လွှတ်တော်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ သည့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်း အက်ဥပဒေ (NDAA) ကို ပြန်လည်ရယူ ရန်အတွက် နေ့လည်ပိုင်း၌ ပြန်လည် စုဝေးခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန် စစ်မှုထမ်းများအတွက် လစာငွေ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးရန်အပါအဝင် ပထဝီနိုင်ငံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများအပေါ် မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ကြသည်။..
ဥပဒေ မူကြမ်းတွင် ပုဒ်မ ၂၃၀ ၌ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီများအား တရားစွဲဆိုမှု မခံရအောင် အကာအကွယ်ပေးထားခြင်း၊ စစ်မှုထမ်းများအတွက် လစာငွေ ၃- ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးရန် ပါရှိနေခြင်း၊ ကွန်ဖက်ဒရိတ် ဗိုလ်ချုပ်များကြီး၏ အမည်များကို စစ်အခြေစိုက်စ ခန်းများမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က သမ္မတ၏ အခွင့်အာဏာအသုံးပြုကာ ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။..
(( နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲမသမာကြောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့် စွပ်စွဲချက်ကို အဖက်ဖက်က တစ်ဖက်သပ် ငြင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ခြင်းတော့ လုံး၀ မဟုတ်ပါ။.
.ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ပြောဆိုသည့်အတိုင်း ပြည်နယ်အချို့တွင် ဆန္ဒမဲများကို လက်ဖြင့် ပြန်လည်ရေတွက်ခြင်း၊ မဲရေတွက်သည့် ကွန်ပျူတာများအား ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် လိုက်လျောမှု များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ စွဲဆိုချက်များအား ပယ်ချခဲ့သည့် ပြည်နယ်နှင့် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများမှာ တရားစီရင်ရေးစံနစ် ဖြောင့်မတ် အားကောင်းသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ နာမည်ပျက် မရှိကြောင်း အစဉ်အလာ ထင်ရှားပါသည်။..
အမေရိကန်၏နိုင်ငံရေးတွင် ပါတီကြီး ၂-ခုသာ ရှိသော်လည်း ကွန်ဂရက်အမတ်များမှာ ကိုယ့်ပါတီက တင်သွင်းသည့်အဆိုမှန်သမျှ ခေါင်းငြိမ့်ထောက်ခံသူများ မဟုတ်ကြပါ။..နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် မိမိပါတီသမ္မတ၏ ဗွီတိုကိုပင် အတိုက်အခံ အမတ်များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ယခုကဲ့သို့ ပယ်ချခဲ့ဖူးပါသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))..
(((Reuters., 02 Jan 2021, “ Defying Trump, US Senate overrides defence bill veto.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))..
Previous Previous post: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ နေ့စဉ် ဦးရေမှာ စစ်ဆေးမှု၏ ၁၀% အောက်အဖြစ် ၁၃-ရက်မြောက် တစ်ဆက်တည်းကျဆင်း၊ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့အထိ ပိုးတွေ့-သေဆုံးနှုန်း ဆက်တိုက် အကျဖက်တွင်ရှိနေ
Next Next post: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ပြန်ပေးဆွဲခံရသူအား ကယ်တင်စဉ် နယ်ခြားသံဆူးကြိုး တံတိုင်းအောက်၌ လျှို့ဝှက်မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကို အိန္ဒိယအာသံရဲတပ်ဖွဲ့ တွေ့ရှိ။ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် အိန္ဒိယနယ်ခြားလုံခြုံရေးတပ်တို့ စစ်ဆေးနေ